Khuburo ka socota Norway oo booqday xarumaha Basaboorka Soomaaliga (SAWIRRO) – Xeernews24
Khuburo ka socota Norway oo booqday xarumaha Basaboorka Soomaaliga (SAWIRRO)
8. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Magaaladda Muqdisho waxaas oo gaadhay Khubaro arimaha hubinta dukumentiyada iyo basaboorada u qaabilsan wadanka Norwey si ay u arkaan habka qaadashada Baasaboorka Soomaaliya.
Imaanshaha wafdiga khubarada ah ayaa ka dambeysay ka dib safaro uu agaasimaha guud ee HSJ ku tagay dalalka reer yurub oo uu kala hadlay in ay aqoonsadaan kuna kalsoonaadaan Basaboorka Soomaaliya. Ujeedada ayaa ah in shakiga iyo kalsooni darada laga saaro dalalkii hore u joojiyey in dalalkooda lagu soo galo baasaboorka Soomaaliga ah.
Wafdiga Khubarada ah oo ay wehlinayeen masuulyiin ka tirsan Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa waxaa la geeyay xarunta baadhista dambiyada ee booliiska ( C I D ) si ay u arkaan habka loo baaro qofka Soomaliga ee raba in uu qaato Basaboorka Soomaaliga, waxayna xarunta C I D kula kulmeen taliyaha laanta Danbi baadhista booliiska Jenaral Saciid Cali Kadiye.
Sido kale khubarada ayaa waxaa la geeyay xarunta Dad dhigista ee Gobolka Banaadir waxaana la soo tusay hab-ka loo maro qaadashada Dhalashada iyo Sugnaanta.
Ugu dambeyn khubarada ayaa soo gaadhay xarunta dhexe ee bixinta Baasaboorka Muqdisho waxayna mid mid u tageen xafiisyada Hay’adda si ay u arkaan habka bixinta Baasaboorka.
Agaasimaha guud ee HSJ Col. Koofi ayaa casho sharaf u sameeyay wafdiga khubarada marka ay soo dhameysteen howlihii ay Soomaliya u yimaadeen, waxaana wafdiga ay agaasimaha guud u sheegeen in hormar weyn uu ka muuqdo dhamaan xafiisyada loo maro qaadashada Baaaboorka isla markaana ay Soomaliya ugu horeyso wadamo badan oo afrika ah oo ay horay u tageen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/norway.jpg 720 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-08 23:55:192017-11-08 23:55:19Khuburo ka socota Norway oo booqday xarumaha Basaboorka Soomaaliga (SAWIRRO)
Kenya Oo Qiratay Jab Xooggan Oo Ay Kala Kulmeen Al-shabaab Iyo Askar Badan Oo... Reer Cabdirahmaan Ceeleeyee oo dhoolatus yaable ku sameeyey degaanadoodi